बजेटमा क्रमभङ्ग | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय बजेटमा क्रमभङ्ग
सम्पादकीय 415 views
वाम सरकारले नेपालको वित्तीय नीतिमा क्रमभङ्ग गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याइने बजेटको आकार ५ प्रतिशत घटाउने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउने परम्परा यसपटक तोडिने भएको छ । यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगले झण्डै ७० अर्बभन्दा कम १२ खर्ब हाराहारीको बजेटका निम्ति अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको समाचार आएको छ । पटकपटक बजेटको आकार घटाइने भो, यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले मुद्रास्फीति बढ्ने अपेक्षालाई केही भए पनि घटाउँछ । तर, बजेटको आकार कसरी घटाइन्छ, त्यसमा पनि धेरै निर्भर गर्दछ । अब आउने बजेटमा लोकप्रियताका कार्यक्रम समावेश नगरिने र जनजीविकाको मुद्दा र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने घोषणा गरिएको छ । यो पनि सही निर्णय हो ।
अब आउने बजेटमा लोकप्रियताका कार्यक्रमलाई थाँतीमा राख्दै जनजीविकाको मुद्दा र सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने घोषणाले भने शङ्का उब्जाएको छ ।
यसअघि बजेटको आकार ठूलो बनाइए पनि खर्च नगर्ने प्रचलन थियो । अब आउने बजेटको आकार घटाइए पनि छुट्याइएको बजेट रकम खर्च भएन भने यो प्रयास पनि निरर्थक हुन्छ । त्यस्तै जुन कामका लागि बजेट बनाइएको छ, त्यही काममा त्यो खर्च नभएर अर्को योजनामा खर्च गर्ने जुन दीर्घ रोग छ, त्यो हट्नु जरुरी छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यसरी आउने दबाब कत्तिको थेग्छन्, हेर्न बाँकी नै छ । अब आउने बजेटमा लोकप्रियताका कार्यक्रमलाई थाँतीमा राख्दै जनजीविकाको मुद्दा र सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने घोषणाले भने शङ्का उब्जाएको छ । किनभने जनजीविकाका मुद्दाका नाममा यो बजेट पनि लोकप्रियताको जालोमा फस्ने छनक देखिएको छ । यहाँ कतिपय यस्ता सरकारी कार्यालयहरू छन्, जुन नभए पनि जनतालाई दिइने सेवामा खासै फरक पर्दैन । बरु त्यस्ता कार्यालयहरू खारेज गरी त्यहाँ रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र जनताको प्रत्यक्ष सेवामा रहेका कार्यालयमा खटाइयो भने पनि अनावश्यक सरकारी खर्च घट्छ । त्यस्ता कार्यालयहरू खारेज गरियो भने पनि त्यो निकै महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ । हालै जारी भएको श्वेतपत्रमा पनि अनावश्यक रूपमा विभिन्न समिति तथा बोर्ड बनाउने गरिएको कुरा उल्लेख भएकाले यस्ता कार्यालय बन्द गरिने अपेक्षा गर्न भने सकिन्छ । अहिले धेरै कार्यालयहरूमा कर्मचारीको अभाव भएर जनताले सही समयमा सेवा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन भने कतै अनावश्यक कार्यालयहरूमा कर्मचारी खटाइएको छ, यो विडम्बनाको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा कुनै पनि आयोजनाका लागि भनेर बजेट माग गरिन्छ । मागअनुसार सरकारले छुट्याइदिएको बजेट सम्बन्धित योजनामा खर्च नगरी बजेटमै नपरेको अरू नै कुनै उद्देश्यमा खर्च गर्ने परम्परा तोड्न सकियो भने पनि बजेटको आकार केही हदसम्म घट्छ । सरकारले अब आउने बजेटको आकार ५ प्रतिशतले घटाउने भनेको छ, यो झण्डै ७० अर्बबराबर हो । त्योभन्दा धेरै नै घटाउन सकिन्छ तर अनावश्यक रूपमा गरिने खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । यसभन्दा आगाडिका वामपन्थी अर्थमन्त्रीहरूले विभिन्न नारा र अभियानका नाममा लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले ठूलो आकारमा बजेट छुट्याउने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । तसर्थ हालका वामपन्थी अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको आकार साँच्चै घटाउनेछन् भन्ने पूर्ण विश्वास भने अझै गर्न सकिँदैन ।